GPS / Akụrụngwa - Geofumadas
Ngwa na ngwa maka nyocha na cadastre
FARO ga egosiputa teknụzụ 3D ọhụụ maka geospatial na iwu na 2020 World Geospatial Forum
Iji gosipụta uru teknụzụ geospatial dị na akụ na ụba dijitalụ yana njikọta ya na teknụzụ na-apụta n'ọtụtụ ngalaba ọrụ, a ga-enwe nzukọ kwa afọ nke World Geospatial Forum na Eprel na-abịa. FARO, ihe uwa kwesiri ntukwasi obi maka uzo 3D, onyonyo na…
Hexagon kwupụtara teknụzụ ọhụụ ma mata ọhụụ nke ndị ọrụ ya na HxGN LIVE 2019, nzukọ ụwa ya maka azịza dijitalụ. Nchikota nke ihe omuma a jikọtara na Hexagon AB, nke nwere ọnọdụ na-adọrọ mmasị na ihe mmetụta, ngwanrọ na teknụzụ kwụụrụ onwe ya, haziri nzukọ nzukọ teknụzụ ụbọchị anọ na Venetian na Las Vegas, Nevada, USA.
Ihe ngosi 3D mobile laser scanning na-enweta mmeri ọ bụrụ na ọ bụrụ na ị nweta akara ngosi
E nyela Leica Cyclone FIELD 360 ngwa onyinye nke abụọ na iF DESIGN AWARD 2019. Tinyere ahụmịhe onye ọrụ (UX) Ergosign, Leica Geosystems gosipụtara ngwa ahụ na otu njikọta. Ruo afọ iri isii na isii, a kpụtara IFF DESIGN AWARD dị ka onye na-ese okwu maka ...
Geotech + Dọnetech: ị gaghị ahapụ ya
Na Eprel 3 na 4 nke afọ a 2019, Fairoftechnology - ụlọ ọrụ Spanish, nke dị na Malaga, na-ahazi ụdị mmemme niile metụtara teknụzụ - na-akpọ ndị ọrụ ibe ha niile ka ha sonye na nnukwu ihe omume, ebe ha ha ga egosiputa otutu ihe ohuru n'ime oge ndi a. Fairoftechnology, nwere otutu ...
Akwụkwọ Ngwuputa Geo-Engineering 6 maka nbudata n'efu
Taa, anyị ga-ewetara gị akwụkwọ ọgụgụ na akwụkwọ iji ghọta ọganiihu teknụzụ na ngalaba nke geo-engineering na mmetụta ya na ndụ kwa ụbọchị. All kpamkpam free na mfe inweta nhọrọ. N'agbanyeghi uto nke teknụzụ etinyere na mpaghara geospatial, ọ dị mkpa ka ị nọrọ na-emelite ka onyinye ọrụ anyị wee nwee ...
Teknụzụ geospatial, ọrụ ya na mkpa ya na ntọala IT na Ngalaba ationgbọ njem.
Teknụzụ nke geospatial. Dika teknụzụ niile eji enweta, jikwaa, nyocha, jiri anya nke uche ma kesaa ma data gbasara ozi ebe ihe dị, ọ gaferela echiche mbụ ya nke triad nwere GIS, GPS na Remote Perception (RS in Bekee) na etinye teknụzụ na-apụta nke na-eji akụrụngwa ...
Mgbe anyị gụrụ echiche dị iche iche na-akwado nkwukọrịta ihe eserese pụtara, ma sayensị ka ọ nọchitere mba dị iche iche yana nka iji nye ozi a ihe ịchọ mma dị mkpa, anyị ghọtara na oge anyị bi na ya gụnyere ọtụtụ omume na ndụ anyị kwa ụbọchị. ebe anyi jiri georeference dika ihe ...
Geospatial - GIS, GPS / Equipment, My egeomates
Ngalaba Ngwakọta Ngwaahịa
Geo-matching na-etinye uche n'otu ebe, uru nyocha ngwaahịa niile nke GIM International na Hydro International. Geo-matching.com bụ ebe nrụọrụ weebụ na-atụle onwe ha maka ngwaike na ndị ọkachamara ngwanrọ n'ọhịa nke geomatics, hydrography, na ọzụzụ metụtara ya. Anyị chọrọ iduga ndị ọbịa anyị labyrinth nke ...
5 Aro maka nchekwa nke akụrụngwa nyocha
O siri ike ikwenye ndị isi n'oge ahụ; na akụrụngwa a ga-azụ ga-enwerịrị ịnshọransị megide izu ohi, mmebi na ihe ọghọm. O kwere nghọta na nke mbụ, ajụjụ ndị dị ka: Ọ bụrụ na a ga-emecha nye obodo anyị ihe ndị ahụ, ọ ga-aka mma ma ha kwụọ ụgwọ mkpuchi ahụ Megide ohi? Nke a ọ naghị enye gị ohere ...
GPS / Equipment, Ntụrụndụ / n'ike mmụọ nsọ, topografia